Suudaan: Dibad baxayaal careysan oo gubay xarunta dhexe ee xisbul xaakimka ee Cadhbara - Halbeeg News
Suudaan: Dibad baxayaal careysan oo gubay xarunta dhexe ee xisbul xaakimka ee Cadhbara
CADHBARA (HALBEEG)- Banaan-baxayaasha ayaa ku baaqaya in la rido Madaxweyne, Cumar Xasan Al-Bashiir, kadib markii uu kacay sicirka Rootiga iyo Shidaalka dalkaasi Suudaan.
Dibad-baxayaashan ayaa dab qabadsiiyay xarunta dhexe ee xisbiga taladahaya, ee magaalada Cadbara iyadoo sawirro laga soo qaaday xarunta shirarka iyo xafiisyada xisbiga oo gubanaya lagu wadaagayo baraha internetka
Magaalada Cadhbara oo 320Km Waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Khartuum ayaa lagu arkayay dibad baxayaasha oo jidadka ku dhex gubayo taayarrada baabuurta.
Goobjooge la hadlay telefishinka Aljazeera ayaa sheegay in sicirka rootiga uu sare uga kacay 1 geni oo lacagta Suudaan ah taas oo u dhiganta ($0.02) waxa uuna gaaray Sadex geniga Suudaan ah oo u dhiganta ($0.063).
Dibadbaxayaashan oo sidoo kale isugusoo baxay magaalada Port-Sudan ee gobolka Bisha Cas ayaa ku dhawaaqay “Hala rido Madaxweynaha,” ooraahdan oo caan noqotay tan iyo markii uu bilowday gugii Carabta sanadkii 2011-kii.
Xaatim Alwasiilaha oo ah guddoomiyana gobolka Bisha Cas ayaa sheegay in xaalad Bandow ah looga dhawaaqay magaalada Cadhbara waxaana la mamnuucay guud ahaan isusocodka laga bilaabo Lixda subaxnimo illaa Lixda galabnimo.
Denmark oo dib u soo celineysa Soomaalida magangalyo doonka ah
Boqollaal saraakiil boolis ah oo maanta tababar loogu soo xiray Muqdisho